"Fa hianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an’i Kristy dia nitafy an’i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany hianareo rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Fa raha an’i Kristy hianareo, dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ka dia tsy mpanompo intsony hianao, fa zanaka: ary raha zanaka, dia mpandova koa noho ny ataon’Andriamanitra." Galatianina 3:26-29; 4:7
Zanak’Andriamanitra. Izany no sata vaovao raisin’izay mino an’i Jesosy Kristy Tompo (26). Inona no vokatr’izany raha dinihina izay voambaran’i Paoly (29)? Lasa anisan’ireo taranak’i Abrahama koa isika, ary mpandova araka ny Teny fikasana. Mitaky fomba fiaina vaovao ny maha-vahoakan’Andriamanitra antsika: fiainana ao anatin’ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina, tsy tarihin’ny fanavakavahana intsony (28). Tsy maintsy mieritreritra fatratra ny fomba fisainako sy fieritreretako aho araka izany: Aiza eo amin’ny fiainako no mbola misy avonavom-panahy mihevitra ny sasany ho ambany na tsy mendrika? Rehefa halalinina mantsy ny dikan’ny hoe “Taranak’i Abrahama”, dia midika ho fianakaviana iray.
Ny velarany. Hatraiza tokoa ary ny velaran’izany sata vaovao maha-zanak’Andriamanitra antsika izany?
Hampaherezin’ny Soratra Masina hanatona an’Andriamanitra amin’ny fahasahiana isika (Hebreo 4:16): aza manaiky mihaino ny fanamelohana ataon’ny fahavalo intsony. N’inon’inona fahalemena mety manelingelina eo amin’ny fiainako, azoko atao ny mametraka izany eo amin’ny Tompo. Efa nentin’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana izany. Tsy mba manavakavaka ny Tompo: tia ny olon-drehetra Izy ary mandray izay rehetra miantoraka aminy: “…izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy” (Jaona 6:37). Raiso amin’ny finoana ny Fanahin’ny Zanaka izay ahafahantsika miantso hoe: “Aba, Ray ô” (Galatianina 4:6). Endrey izany fampanantenana entin’ny Tenin’Andriamanitra! Na malahelo aho na faly, afaka miantso sy miresaka amin’i Dada Malala.